Ny fanontaniana raha azo atao ny manova ny zava-misy, manahy ny olona fahiny. Amin'izao fotoana izao, tsy ny rehetra no mino fa ny fanatsoahan-kevitra rehetra dia efa misy, fa rehefa misedra loza maro no miseho, vitsy dia tsy hieritreritra fa tsy azo ihodivirana izany. Raha raisintsika ho marim-pototra fa mbola tsy voalahatra hatramin'ny ambaratonga eo aloha ny zava-dehibe sasany amin'ny fiainantsika, dia mbola misy ny fanontaniana momba ny fomba hanovana ny anjarantsika? Na izany na tsy izany, tsy voatery hoe inona izany, dia afaka mifanaraka amin'ny olona iray.
Ahoana ny fomba hanovana ny zava-misy ho tsara kokoa?
Indraindray ny olona dia manindry ny raharaha andavanandro ka manadino tanteraka izay alehany. Ary amin'izao fotoana izao manomboka mahatsapa indray ny tenany, dia tonga ihany koa ny fahatsapana fa ny fiainana dia tsy izay rehetra tiany ho hita.
Raha hitanao fa tsy mivoatra araka izay irinao ny anjaranao, dia andramo ny fandinihana ny toe-draharaha amin'ny lafiny hafa:
Ahoana ny fomba nahatongavanao?
Inona manokana tsy mifanaraka aminao?
Ahoana no ahafahanao manamboatra zavatra tsy mifanaraka aminao?
Moa ve tsy mahafa-po anao amin'ny sehatra iray ihany ny fiainana?
Inona no efa nataonao mba hanovana ny toe-javatra?
Amin'ny ankapobeny, ny fanontaniana farany no tena manan-danja. Raha tsy mifanaraka aminao ny androm-piainanao, ary vao tsapanao izany, fa mbola tsy nanao na inona na inona ianao - dia eo amin'ilay lalana diso ianao. Mba hahazoana zava-misy vaovao, mila mandray andraikitra vaovao ianao.
Maro no mandresy lahatra ny amin'ny fomba hanova ny tanjon'ny fisainana. Na izany aza, ny eritreritra amin'io tranga io dia afaka manampy anao hanangana asa fanampiny izay hanampy anao hanova ny zava-drehetra, ary avy eo dia miova ny zavatra rehetra!
Raha tsy tianao ny asanao - mitady iray vaovao. Raha mihevitra ianao fa lasa ny talentanao raha tsy nahazo laza marina, mitadiava fomba iray hilazana ny olona momba izany. Ny zava-dehibe indrindra, tadidio - tsy ho tara loatra ny manomboka. Olona maro no nanova ny fiafaran'izy ireo ho an'ny tsara kokoa amin'ny fisotroan-dronono - ary tsara kokoa noho ny hatramin'izay.
Ahoana ny fomba hanovana ny ho avy sy ny fitiavana?
Olona maro ao amin'ny fifandraisana sarotra no azo antoka - ity manaraka ity dia mitondra azy miaraka amin'ny olona manokana. Fa raha tsikaritrareo fa voafaritra amin'ny mpiara-miasa iray ianao, izay tsy azo inoana ny fifandraisanao amin'ny antony maromaro, dia eritrereto izany - angamba io dia marika fa mila mitondra ny anjaranao ho eo amin'ny tananao ianao ary hamono azy manokana?
Mba hahafahan'ny fitiavanao hanome anao fahasambarana , aza avela ho lasa tia ny olon-kafa ianao. Ataovy ao am-pasana ny ao am-ponao, ary aza avela hisy olona hiditra ao. Mora kokoa noho ny fandeferana ny fahasorenana noho ny fitiavana.
Ny rafitra ara-tsaina amin'ny toetra
Ny fomba Dembo-Rubinstein
Filma misy fiantraikany amin'ny psyche
Fihetseham-po ara-pihetseham-po - inona izany ary ahoana no fomba hiatrehana izany?
Inona no tokony hatao ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatrao?
Kringlean Shopping Center
Michael Douglas sy Catherine Zeta-Jones no sambany vao teraka
Trondro nokarakaraina tamin'ny voatabiha
Ny efamira adrenalina - asa
Ny fitsaboana ny voa amin'ny vary - ny fitsaboana nentim-paharazana
Nitsidika ny tranom-bakoka tao Londres i Kate Middleton, nanajamba ny mpihaino tamin'ny tsikiny
Kitapo mofomamy iray anaty menaka
Mangalatra avy amin'ny mpifaninana
Karazam-bary natao tamin'ny poketra
Fombafomba ho an'ny Paka hanambady